कर्मचारीको जागिर मात्रै पकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ - Karobar National Economic Daily
कर्मचारीको जागिर मात्रै पकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ
query_builderMay 31, 2017 11:19 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility3125
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा । तस्विर : दिपक गाउँले
संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि अहिलेको संक्रमणकालका लागि प्रमुख चुनौति रहेको छ । दुई किसिमका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र तीनै तहका निजामति सेवा ऐन कसरी ल्याउने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । यद्यपी कर्मचारी समायोजन विधेयक भने सरकारले पारित गरी व्यवस्थापिका संसद्मा टेबुल भएको छ ।
संविधान बनेको करिब २० महिना हुँदासमेत सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भेक्षणसमेत गरेको छैन । कर्मचारी खटिने बेलासम्म ठोस आधार तयार नहुँदा कर्मचारीसमेत अन्योलमा छन् ।
कुन तहमा कति कर्मचारी चाहिने र तत्कालीन स्थानीय निकायका स्थानीय कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन । तीन तहका सरकारका लागि कहाँ कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने अझैसम्म निक्र्यौल भइ सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा सवा दुई खर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
अबका दिनमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने उच्च मनोबल भएका, तिक्ष्ण, नीति, योजना बनाउने ल्याकतका, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उच्च दक्षता भएका र जनप्रतिनिधि र जनतासँग घुलमिल भएर संविधानका दायित्व पूरा गर्न सक्ने कर्मचारीको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन, तीन तहका निजामति सेवा ऐन, कर्मचारीको वर्तमान प्रवृत्ति, चुनौति र समाधानका बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटासँग कारोबारका लागि भगवान खनालले गरेको कुराकानीः
हालै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अगुवाइमा बनेको प्रस्तावित निजामति कर्मचारी समायोजन विधेयकको विशेषता के हो ?
यस विधेयकमा कर्मचारी समायोजनका सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, कर्मचारी समायोजनको प्याटर्न, कति समयमा जाने, तोकिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने बारेमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो ‘अस्थायी समायोजन’ हो । त्यसैले यसलाई समायोजन नभनी ‘काम सूचारु’ गर्ने विधेयकको रूपमा लिइएको छ । स्थानीय स्तरमा अहिले पनि पहिलेका गाविस, नपा र विभिन्न सरकारी निकायका निजामति कर्मचारी छन् । जस्तै कृषि, भेटेनरी, स्वास्थ्य, वनलगायतका कर्मचारी विद्यमान छन् भने तत्कालीन स्थानीय निकायका कर्मचारी पनि छन् ।
यसैले पूर्ववत् सेवासर्तमा केही फरक नपर्ने गरी निजामति र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू जहाँ जुन अवस्थामा, जे जस्तो सेवा सुविधा पाइरहेका छन्, त्यही टिओआर लिएर जाने गरी समायोजन गरिन्छ । यसैले कर्मचारी समायोजनमा मिलाउनुपर्ने धेरै कुरा छन् । अहिलेको अस्थायी समायोजन पछि चाहिँ केही गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खासगरी निजामति सेवातर्फ कर्मचारीमा ‘श्रेणीगत’ व्यवस्था छ भने तत्कालीन स्थानीय निकायका कर्मचारीमा भने ‘तहगत’ व्यवस्था छ र यही व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाका निजामति कर्मचारीमा रहेकाले यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने छ । कसरी श्रेणी र तहका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने भन्नेमा उक्त प्रस्तावित विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ । त्यसलाई मिलाएर संगठनमा ढालेर संगठित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संघीयतामा कति कर्मचारी चाहिन्छ ?
अहिलेसम्म संघीयता व्यवस्थापनका लागि तीनै तहमा कति निजामति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर सरकारले संगठन र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) भन्ने सर्भेक्षण नगरेकाले यति नै कर्मचारी चाहिन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।
ओ एन्ड एम सर्भेक्षण भएपछि मात्रै कर्मचारीको स्थायी समायोजन हुन्छ । यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय निजामति ऐन पनि चाहिन्छ ।
धेरै कर्मचारी चाहिन्छ । वडादेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारी समायोजन गरेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत, लेखा अधिकृत, सिभिल इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर रहन्छन् ।
यसैगरी सवारी साधन भएको अवस्थामा चालकसमेत हुन्छन् । यसैगरी जनप्रतिनिधिलाई पनि काममा सहयोग गर्न एक–दुई सहयोगी कर्मचारी पनि दिनुपर्ने होला । यसको गृहकार्य भइरहेको छ ।
यसका लागि आजै (मंगलबार) संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग छलफल भयो । स्थानीय विकासले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ गृहकार्य गरिरहेको छ ।
नयाँ कार्यविधि, आदेश आउँदै छ । पहिलेको कार्यविधिमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नआउञ्जेल भनेर लेखिएको रहेछ । अहिले पठाएको समायोजन हैन । समायोजन त्यतिबेला भनिन्छ, जतिबेला ओ एण्ड एम भएर कर्मचारी तोकिन्छ ।
विकेन्द्रीकरणको करिब दुई दशकको अभ्यासमा स्थानीय सेवा गठन गर्ने अधिकार भए पनि गरिएन । अहिले पनि संविधानले स्थानीय सेवा गठनको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ । खासमा यो के हो ?
हो, विकेन्द्रीकरणमा स्थानीय सेवा गठन भएन । तर पनि तत्कालीन स्थानीय निकायले कर्मचारी भर्ना गर्न कुनै रोकतोक गरिएन । अब चाहिँ तीनै तहका सरकारमा तीन किसिमका निजामति कर्मचारी रहन्छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारी पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनौट र नियुक्त गर्ने हो । अर्को निजामतिलगायतका कर्मचारीहरूलाई सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको हो ।
अबको प्रणाली भनेको सेवा प्रवाह मुख्य उद्देश्य हो । एउटै छातामुनि सबै किसिमका सेवा दिने हो । जनताले ढोकाढोका चहार्दै हिँड्नु नपरोस् । अब एउटै ढोकाबाट सेवा दिने हो । यतातिर हाम्रो प्रयास मुखरित हुन्छ ।
संघीय निजामति सेवा ऐनका लागि के काम अघि बढेको छ ?
यो चाहिँ ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । सरोकारवालाहरूसँग कुरा भएको छ । यसको छलफल निकै विकास भइरहेको छ । प्रदेश निजामति सेवा ऐनको पनि एक चरण छलफल भइसकेको छ ।
स्थानीय तहको पनि यसरी नै हुन्छ । समायोजन त अघि नै बढेको छ । चारवटै ऐन एकैपटक आउनुपर्छ । जुन अघि आउँछ, संसद्मा पेश गरिहाल्छौं । ऐन जारी हुँदा एकैपटक जारी गर्ने भन्ने हाम्रो प्रयास हो ।
निजामति र सुरक्षातर्फ कर्मचारी वा सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि समन्वय गरिन्छ ?
आजै (मंगलबार) पनि अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन तथा निजामति कर्मचारी समायोजन समितिले छलफल गरेको हो । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी वलका प्रमुखसँग छलफल गरेका थियौं । हाम्रो प्रयास के हो भने सुरक्षा भएन भने धेरै कुरा डिस्टर्व हुन्छ । त्यसैले सुरक्षामा उहाँहरूले गरिरहेका काम के–के हुन् र त्यसलाई हामीले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो ।
कतिपय कुरा निजामति कर्मचारी र नेपाल प्रहरीको युनिफर्मिटी हुन्छ । गृह मन्त्रालयको पनि ओ एण्ड एम अध्ययन गर्ने निकाय भनेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै हो । प्रदेश र नगर प्रहरी खटाइँदै छ । त्यहाँ कर्मचारी जाँदैछन् । यसैले तालमेल मिलाउनुपर्छ । काम गर्ने आधारभूत सिद्धान्त एउटै हो ।
नेपालको निजामति कर्मचारी क्षेत्र टे«ड युनियनले धमिलिएको छ । अब संघीयता कार्यान्वयनमा उनीहरूले संग्लो भूमिका खेल्ने कसरी बनाउने ?
मेरो विचारमा टे«ड युनियनका सबै गतिविधि नकारात्मक छैनन् । तर कतिपय अवस्थामा ती संस्थाका आ–आफ्ना सोच होलान् । यसो भन्दैमा उहाँहरूलाई केही नभन्ने वा त्यत्तिकै छोड्ने भन्ने हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न, संघीयता व्यवस्थापन गर्न उहाँहरूको भूमिकालाई अझ बढी रचनात्मक र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ ।
अबका कर्मचारी ती काम गर्न बहुशीप भएका हुनुपर्छ । किनकी काम धेरै गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी भन्दा निकै राम्रा कर्मचारी भोलिका दिन चाहिन्छ । यसैले अब कामोन्मुख हुनुपर्ने स्पष्ट छ ।
स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन गर्ने ल्याकत कर्मचारीले राख्छन् भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ?
यो महत्वपूर्ण र चुनौतिपूर्ण छ । एकदम सान्दर्भिक र जायज इस्यु हो । बजेट गएको छ । अब बजेट दिएर तिमीहरू जेसुकै गर भनेर छोड्नु हुँदैन । यस्तो गल्ती भयो भने मुलुक राइट ट्रयाकमा जाँदैन ।
अब हिजोसम्म नभएका काम निकै उत्साह र रचनात्मक रूपले गर्नुपर्छ ।हाम्रोमा काम नगरे पनि जागिर पाक्ने गलत प्रवृत्ति अहिलेसम्म छ । अब यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसैले कर्मचारीको क्षमता बढाउनुपर्छ ।
उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्छ । कर्मचारी र जननिर्वाचित पदाधिकारीलाई सँगै राखेर सुशासन र उत्तरदायित्वका सबै कुरा राखेर तालिम दिनुपर्छ । यसैगरी कर्मचारी खटाउँदा कार्य सम्पादन करार गराउनुपर्छ ।
कामै नगर्ने, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीको पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) उच्च रहेको पाइन्छ ? यो त विकृति होइन ?
हो, यो विषय पनि राम्रोसँग छलफलमा उठेको छ । एउटा उदाहरण कस्तो छ भने २० किलोमिटर सडक पक्की बनाउनुपर्नेमा ५ किलोमिटर पक्की गराउने कर्मचारी पनि कर्मचारी प्रशासनका विशिष्ट ओहोदामा पुगेका छन् ।
कामै नगर्ने कर्मचारीले पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सतप्रतिशत प्राप्तांक हासिल गरेका छन् । ४० मा ४० नै अंक पाएका छन् । अब यो स्थिति आउन दिनुहुन्न ।
यस्तो गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । हामीले जनतालाई केन्द्रको अधिकार दिएका छौं, अब जनताले पनि मूल्यांकन गर्न सक्छन् । एक–दुई वर्षमा जनताले पनि मूल्यांकन गर्न सक्छन् । विदेशमा पिपुल बोनस सिस्टम छ । यो भनेको राम्रो काम गर्ने कर्मचारी उपल्लो तहका लागि जनताबाटै अनुमोदन हुन्छन् । नेपालमा पनि यस्तो प्रणालीको आवश्यक छ ।
बेरुजु पनि नघटाउने कर्मचारी स्थानीय तहमा जाँदैछन् । उनीहरूले कसरी काम गर्लान् ?
कार्य सम्पादन करारमा बेरुजु घटाउने सर्त पनि राख्नुपर्छ । कासमुमा पनि यसलाई प्रमुख सर्तका रूपमा हेरिनुपर्छ । अब हिजोको काम गर्ने प्रवृत्तिले चल्दैन । जनता सन्तुष्ट पनि हुँदैनन् । कर्मचारीले यो कुरा हृदयंगम गर्नुपर्छ । तर उनीहरूसँग काम गर्ने क्षमता चाहिं नभएको होइन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको अधिकार सम्पन्न संघीय कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको काम के हो ?
विधेयकलाई डिस्टर्व गर्दैन । माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा बनेको अधिकार सम्पन्न निजामति कर्मचारी पुनःसंरचना समितिले तीन वटै तहका कर्मचारी मिलाउन गरी कर्मचारी पुनःसंरचनाको काम गर्दै छ । त्यसका लागि निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । समितिले जनतालाई डेलिभरी गर्नुपर्ने सेवा एउटै छानाबाट र एउटै ढोकाबाट दिने गरी काम गर्दै छ ।
यसैगरी दोस्रोमा कर्मचारी खटनपटन कार्यका लागि उचित के हुन्छ भनेर गहिरो रूपमा हेरिरहेको छ । तेस्रो विद्यमान संक्रमणकालमा कसरी कर्मचारी पठाउने भन्ने पनि काम गरिरहेको छ । यस समितिले यसअघि प्रस्तावित गरिएको कर्मचारी समायोजन विधेयकलाई कुनै असर पु-याउँदैन । बरु स्वामित्व ग्रहण गर्छ ।
बुधबार पनि राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय व्यवस्थामा संघमा कति मन्त्रालय चाहिने भन्ने बारेमा छलफल हुँदैछ । मन्त्रालयपछि विभागको संख्या एकीन गरिनेछ । यसपछि प्रदेश र स्थानीयस्तरको बारेमा निर्धारण गरिन्छ ।
प्राविधिक कर्मचारी कसरी खटाउने ? हिजोका गाविसमा पूर्णरूपमा कहिलै पनि सचिव पु-याउन सकिएन । यस्तो स्थितिमा स्थानीय तहमा सबै पद र दरबन्दीमा पूर्णरूपमा कर्मचारी पूर्ति हुन्छन् र तोकिएका काम सम्पादन हुन्छन् भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने ?
माथि नै भनिसकेको छु, अहिलेको संक्रमणकालनमा कर्मचारी खटाउने कार्य चुनौतिपूर्ण छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोचिरहेका छौं । त्यसैले यो निकै पेचिलो छ । अब स्थानीय तहमा कर्मचारी पु-याउनु उत्तिकै दायित्व हो ।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका निर्वाचित अध्यक्ष÷प्रमुख रहेको समिति बनेको छ । यस समितिले जिल्लास्तरमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी अपुग कर्मचारी हामीसँग माग गर्छ ।
अब हिजोजस्तो गाविस सचिव रिक्त भएझैं, एउटालाई एकभन्दा बढी गाविसको जिम्मेवारी दिएझैं गरिन्न । त्यसरी खाली राखिन्न । समायोजन ऐन बनाउँदा प्राविधिक कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेलगायत कर्मचारीका पेशागत मुद्धा उठेका थिए । त्यसैले उनीहरू जुनसुकै सेवामा भए पनि करियर सुरक्षित राखिन्छ ।
प्रदेश–स्थानीय लोकसेवाबाट उत्तिर्ण भएका संघमा आउने, संघबाट पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरी ढोका खुला राखिने छ । अन्तरसम्बन्धित गरिनेछ । उनीहरूलाई मेरिटका आधारमा जुन सरकार मातहत काम गर्छन् त्यहाँको उच्च पदमा पुग्ने व्यवस्था गरिन्छ । यसैगरी वृत्ति विकासमा पनि अहिलेकोमा कुनै फरक पारिन्न ।
संविधानले गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । अब हामीले नयाँ काम गर्दा नीति राम्रो बनाउनुपर्छ । ऐन, कानुन उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ । संगठन पनि छिटो, छरितो र उम्दा बनाउनुपर्छ । सबैले असल काम गर्ने नियत राख्नुपर्छ ।
कार्यविधिहरू पनि स्पष्ट बनाउनुपर्छ । हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक पक्षको पनि सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अबका कर्मचारी जहाँ काम गर्न जान्छन्, त्यहाँको भाषा, संस्कृतिको पनि जानकार हुनु राम्रो हुन्छ । वीरगन्जमा काम गर्नेले त्यहाँको भाषा पनि जान्नुपर्छ ।
यसले स्थानीय जनताको मन जित्न सहयोग गर्छ । अबका कर्मचारीले आफ्नो पदको मात्रै काम गर्ने होइन, अरुको पनि गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुपर्छ । यसो भएमा थोरै कर्मचारी पनि पुग्छ । यसो भएमा धेरै तलव भत्ता पाउँछन् । निजामतिमा योग्य कर्मचारी छन् अब उनीहरूले प्रस्फुटन गर्ने मौका पाउँछन् ।
लेखाका कर्मचारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लेखाका अधिकृत, लेखापालहरूको खटनपटन गरिसकेको अवस्था छ । प्रशासनका स्थायी कर्मचारी गएका छन् । सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत तहका कर्मचारी गएका छन् ।
तपाईंहरूले अधिकांश स्थानीय तहमा किन तालिमी अधिकृतलाई अधिकृत बनाएर पठाउनुभएको हो ?
उनीहरूलाई पठाउन हामीलाई बाध्यता भयो । अहिले दुईवटा कुरा आएको छ । अब उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने वा त्यहीँबाट तालिम पुरा गराउने । फिर्ता बोलाउँदा स्थानीय तहमा पद खाली हुन्छ । यसैले त्यहीँ राखेर नै उनीहरूको बाँकी तालिम पुरा गराउने भन्ने छ । यही सोचाइ लिइएको छ ।
संविधान संघीयता कर्मचारी व्यवस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय